Shaqaalihii hay’adda DDG ee Gaalkacyo laga qafaashay madaxfurasho laga dalbadey – SBC
Shaqaalihii hay’adda DDG ee Gaalkacyo laga qafaashay madaxfurasho laga dalbadey
Labadii qof ee ajanabiga ahaa ee ka mid ahaa shaqaalaha hay’adda Danish Demining Group ee dhawaan laga qafaashay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa la sheegay in ay gacanta ku hayaan kooxaha burcad badeeda Soomaalida, kuwaasi oo dalbadey lacag madaxfurasho ah, sida ay sheegeen duqeyda dhaqanka ee deegaankaasi.
Ajaanibtan oo kala ah Jessica Buchanan oo ah haweenay Mareykan ah iyo Dane Poul Hagen Thisted oo ah nin u dhashay wadanka Denmark ayaa la xaqiijiyey in lagu hayo deegaanka Dabagalo oo ka tirsan degmada Hobyo ee maamul goboleedka Galmudug.
Maxamed Jaaamc oo ka mid ah duqeyda dhaqanka ee degmada Hobyo ayaa xaqiijiyey in la haystayaashu ay bad qabaan isla markaana kooxda haysata ee burcad badeeda ah ay doonayaan lacag madaxfurasho ah oo laga siiyo dadkan ay haystaan.
“Waxaan helaynaa warar ku aadan in shufto badeedu ay qorsheynayaan in ay ka wadaan deegaankaasi la haystayaasha, waayo waxay kala kulmayaan cabsi diyaarado hawada deegaankaasi dul heehaabaya” ayuu yiri Maxamed Jaaamc.
Nin Soomaali ah oo lala qafaashay labadan qof ee ajanabiga ah ayaa la sheegay in ay siidaayeen kooxdii qafaalatada aheyd, iyadoo ninkaasi ay haatan su’aalo waydiiyaan Booliiska Galmudug, sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoonyahay.
Oday dhaqameed kale oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Xuseen ayaa sheegay in dadka deegaanka ee soo arkay la haystayaasha ay u sheegeen inay bad qabaan isla markaana ay ku hareeraysan yihiin koox hubaysan oo 15 qof gaaraysa, isla markaana meesha lagu haysto aanay ka fogeyn degmada Hobyo.
Saraakiisha amaanka ee maamulka Galmudug ayaa sheegaya inay xireen dhawr qof oo lala xiriirinayo falkaasi afduub.
“Ciidamada amaanku waxay wali waxay baacsanayaan afduubayaasha, kuwaasi oo aan rumeysanahay inay ku dhuumanayaan agagaaraha Hobyo” sidaasi waxaa yiri Axmed Sahal oo ka mid ah saraakiisha amaanka ee magaalada Gaalkacyo qaybta maamulka Galmudug.
“Afar qof oo laga shaki qabo iyo baabuur ayay ciidamadu qabteen, kuwaasi oo su’aalo la waydiinayo “ ayuu hadalkiisa sii raaciyey Mr Sahal.